Mbappe Oo Ka Careysan Saxiixa Messi Iyo Real Oo Qorshe Xeeladeysan Ugu Dhaqaaqaysa – Garsoore Sports
Sida ay ku warramayso Cadena SER, fikradda Real Madrid ayaa ah inay hal dalab oo dhan 120 milyan oo euro ka gudbiso Kylian Mbappe iyadoo la rajaynayo in PSG ay si fiican u eegi doonto ama, ugu yaraan la iman doonto beddel kale oo ay wada-xaajoodyada ku bilaabi karto.
Lacagtu 120ka milyan waxay u ekaan kartaa mid hooseeysa, marka la eego waxa la bixiyay toddobaadyadii lasoo dhaafay; Tusaale ahaan, City ayaa kaliya ku bixisay 117 milyan oo yuuro saxiixa Jack Grealish. Laakiin Madrid waxay dooneeysan inay Mbappe kusoo xerogelisay qaacido u shaqaysay iyaga mar hore.
Xeelad ay Real Madrid dhowr jeer ku celcelisay ayaa ah inay sugto ilaa sanadka ugu dambeeya qandaraaska ciyaaryahanka kaddibna dalab deeqsinimo leh u gudbiso kooxda iska leh ciyaaryahanka. Tusaalahihii ugu dambeeyay waa Eden Hazard, kaasoo Madrid ay ku bixisay 100 milyan oo yuuro xagaagii 2019. Isla sidaas oo kale ayay kusoo iibsatay Thibaut Courtois 2018 iyo Toni Kroos 2014.
La Gazzetta dello Sport ayaa werisay in Mbappé uu ka carooday saxiixa Messi, taasoo meesha ka saareysa qaybtii uu ku lahaa sumcadda iyo kala sarreynta qolka labiska PSG. Wargeyska Talyaaniga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in qorshaha xiddiga reer France uu yahay inuu hadlo Isniinta si uu u muujiyo waxa uu damacsan yahay mustaqbalka.
Weeraryahanka da’da yar ayaa laga yaabaa inuu tilmaamo waxa uu ka filayo suuqa kala iibsiga, kaasoo xirmi doona 31ka Ogosto.
Mbappé kaliya hal sano ayaa uga hartay qandaraaskiisa, haddii aysan PSG haatan aqbalin dalab ay usoo gudbiso Real Madrid, xagaaga soo aadan wuxuu ku imaan karaa Santiago Bernabéu lacag la’aan.
Van Dijk Oo Heshiis Cusub U Saxiixay Liverpool